Eden Hazard ayaa ku soo laabtay tababarka Kooxda Real Madrid Horyaalka Spain
David de Gea oo bartilmaameedka koobaad u noqday kooxda BSG.
Home Horyaalka Spain Eden Hazard ayaa ku soo laabtay tababarka Kooxda Real Madrid
Eden Hazard ayaa ku soo laabtay tababarka Kooxda Real Madrid
Eden Hazard ayaa xaadir ku ahaa xerada tababarka Real Madrid jimcihii, taas oo dab ku sii shiday wararka sheegaya in weeraryahanku uu ka soo laaban doono xaaladiisa murqo ee ugu dambaysay sida la filayo.
30 jirkaan ayaa seegay labadii kulan ee ugu danbeysay ee Madrid ee La Liga dhaawac, waxaana loo maleynayay in ciyaaryahanka reer Belgium uu garoomada ka maqnaan doono ilaa bartamaha bisha Maarso dhibaatadiisa ugu dambeysay.
Hazard ayaa lagu sawiray xarunta tababarka kooxdiisa Isbaanishka jimcihii, in kasta oo weeraryahankii hore ee Chelsea uu qaatay tabarka si uu ula ordo halka saaxiibadiis ay isku diyaarinayeen kulanka axada ee ay gurigooda kula ciyaarayaan Valencia.
Xiddiga reer Belguim ayaan loo tixgelin doonin kulanka ay wajahayaan Los Che, halka ay u badan tahay inuusan ku lug yeelan doonin kulanka horyaalka ee ay la leeyihiin Real Valladolid bisha Febraayo 20.
Madrid ayaa wajihi doonta Atalanta BC lugta hore ee wareega 16ka Champions League 24ka Febraayo, inkastoo, xidigan laga yaabo inuu ku lug yeesho kooxda reer Talyaani.
Hazard ayaa kaliya dhaliyay seddex jeer 13 kulan oo uu u ciyaaray kooxda Zinedine Zidane xilli ciyaareedkan.
Previous articleFalanqeynta Kulanka Darbiga Manchester City Vs Tottenham Hotspur ee Horyaalka Premier League
Next articleArsenal oo ku dhow inay heshiis la gaarto da’yarka Sporting Lisbon
Timothy Weah oo shaaca ka qaaday inuu ku dhawaaday inuu kubiiro...
Wararka Ciyaaraha Maanta1949
Suuqa kala iibsiga752